Izitayela Zentshebe - Izeluleko Zemfashini Kumadoda AseSitayeleni | Amadoda aSitayela
U-Alicia tomero | | Kugundiwe, Ukunakekelwa komuntu siqu, imfashini, Amathrendi
Ngokusho kocwaningo abesifazane bathanda abesilisa abanezintshebe ngaphambi kwamadoda agundiwe. Kumele ubone ngeso lengqondo ukuthi kukhona igagasi elikhulu lamadoda anobuso bawo obugcwele izintshebe zabo bonke ubujamo nezitayela, ezimfishane noma ezinamahlathi, futhi kungenxa yokuthi njengamanje isetha izitayela zomzimba wamadoda.
Ingabe ungomunye walabo abathanda intshebe? Awu unenhlanhla, ngoba abesifazane babona la madoda njengabantu ngamakhono okuzala kanye nempilo enhle. Uma ucabanga ukushiya ezinye izinwele, singakunika nezitayela zentshebe ezihamba phambili ezingakuthopha ngokuya ngobuso bakho.
1 Izitayela nentshebe
1.1 Intshebe egcwele
1.2 Isilevu sesitayela se-DRM
1.3 Ibhele noma i-Hipster Beard
1.4 Intshebe yesitayela sePadlock
1.6 Isilevu sesitayela seBandholz
1.7 Isitayela sikaVan Dyke
2 Ungayifaka kanjani intshebe kuye ngesimo sobuso
Okulandelayo, sichaza imininingwane ukuthi iziphi izintshebe ezimaka kakhulu isitayela sazo ngokuya ngokubukeka kwazo. Vele, ngayinye yazo izoncika ku-fukuma kobuso nobuntu bomuntu ngamunye. Singathola kusuka ezinsukwini zakudala kuya ezintshebeni ezinkulu eziminyene ezibonakala zingenamkhawulo.
Kuyinto yemvelo kakhulu, i-classic futhi ngaphandle kwamalungiselelo aqhubekayo ukwedlula ukusikeka ongakudinga. Ukuze ukwazi ukugqoka le ntshebe ngobuhle nangokuthile okude, kufanele uthathe uchungechunge lwezinto ongazifunda esigabeni sethu. Akunamfihlo omkhulu wokuthi ungagqoka kanjani, Kufanele nje uyivumele ikhule kuwo wonke amakhona wobuso bakho bese ulinda ukuthi ikunikeza hlobo luni lokuminyana kwabantu.
Isilevu sesitayela se-DRM
Lesi sitayela siza kakhulu futhi senzelwe amadoda kuphela athanda ukumaka isitayela sawo ngomlingiswa omkhulu ovuthiwe. Kuqukethe ukuba namadevu amakhulu futhi awugqinsi ezinhlangothini futhi enye intshebe kufanele inqunywe, ngathi izinsuku ezintathu. Umehluko wayo uyamangalisa futhi kufanele ugqokwe ngekhanda kuze kube sekugcineni.
Intshebe egcwele, yesitayela se-DRM
Ibhele noma i-Hipster Beard
Lolu hlobo lwentshebe obeye aziwe njengo'Garibaldi'. Okuhle futhi okuthophayo kakhulu emadodeni amaningi, nakubo bonke labo abangafuni ukwenza ukunakekelwa okuningi futhi yiyeke yinde ngokuphelele. Kwabaningi kuzoba yikhono elihle ngoba kungadinga ukunakekelwa nokubekezela okukhulu. Kepha kwabanye kungaba enye ingxenye yomzimba wabo okumele ilungiswe ngezikhathi ezithile kokubili ubude bamadevu abo nobude bayo.
Intshebe yesitayela sePadlock
Yintshebe esala imile okwembuzi. Kudinga ukunakekelwa kwansuku zonke ngosizo lwe-razor enkulu noma i-trimmer, izobekwa kuze kube yilapho ufuna ukubukeka okufisayo, okungapheli esitayela. Kuqukethe ukuvumela izinwele zikhule zizungeze umlomo ukuze kuhlanganiswe kuphela izimbuzi namadevu futhi kungavumeli noma yiziphi izinwele zikhule ezihlathini nasezihlathini.
Kuyinto engokwemvelo kakhulu futhi ebhejwa kakhulu kubo bonke ubuso. Futhi kulula njengokuvumela intshebe yakho ukuthi ikhule usuku olulodwa nje, ukuze igcinwe ilingana njalo. Akusekho imfihlakalo, ngoba kufanele uyiyeke ikhule lapho ikhula khona ngokwemvelo. Insingo izokusiza ukuthi ugunde ubude bentshebe yakho lapho kudingeka.
Intshebe yesitayela sentshebe nentshebe yezinsuku ezintathu
Isilevu sesitayela seBandholz
Ngenye indlela yokugqoka ubuso obunoboya obukhulu, ngaphandle kokusikeka noma kokuchibiyela ukudala leso sitayela seBandholz, esakhiwe ngumdali waso u-Eric Bandholz. Yini okuhlukile ngale ntshebe? Yisitayela sakhe eside futhi esigcwele ngaso amadevu azidlayo, amakhulu, akhule kakhulu agoqekile, emaphethelweni womabili.
Isitayela sikaVan Dyke
Kuthatha i-morphology yayo kwisitayela esinikezwe umdwebi u-Anthony Van Dyke. Inokubukeka okufanayo nesitayela se-padlock, kuphela Ukubukeka kwezimbuzi nentshebe kugundwe ngokuphelele ezinhlangothini, okungukuthi, ezihlathini nasemhlathini. Kuyisitayela esingajwayelekile, kepha ngasikhathi sinye sihle.
Isilevu sesitayela seBandholz nesitayela sikaVan Dyke
Ungayifaka kanjani intshebe kuye ngesimo sobuso
Akungabazeki kukhona ubuso obuvuma cishe noma yiluphi uhlobo lwentshebe, kodwa ezinye kufanele zisikwe futhi zilolongeke ncamashi, kuya ngesimo sobuso. Ubuso obuyisiyingi cishe zonke izinhlobo zentshebe zivunyelwe. Ungakhetha isitayela bese uzama ukuthi asakhi ubuso obuyindilinga kakhulu, uma kunjalo, kufanele susa ivolumu kuma-sideburns bese ushiya indawo yesilevu isikhathi eside.
Ngobuso obude kufanele ubuke ukulinganisa, kufanele unwebise izinhlangothi, ukushiya ukubhebhetheka okusemaceleni kukhulu kakhulu nendawo yesilevu imfishane. Ngobuso obuyindilinga uzobheja ekushefeni izinhlangothi zobuso, okusho ukuthi, ingxenye yezihlathi, bese eyinika ukubukeka okuvuleke kakhulu, kusale imbuzi ethile.
Ebusweni obuyisikwele kufanele ushiye izinwele eziningi kakhulu engxenyeni emaphakathi yesilevu futhi wehlise izinhlangothi. Okwalabo ubuso obunxantathu kufanele wenze izici zithambe futhi lokhu kuyindlela enhle gqoka intshebe egcwele, njalo nge-gradient enhle. Ukukhethwa kwanoma yikuphi okukhethwa kukho kungaphezu kokuphakelwa, uma usenokungabaza futhi ufuna ukwazi ukuthi kuyadingeka yini ukugqoka intshebe noma cha, ungasifunda ku lesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izitayela zentshebe
Uyangibuka bese ebheka eceleni ngokushesha
Ungaba kanjani indoda enhle